နားခိုရာ: January 2008
Posted by little moon at 6:34 PM2comments:
အခုတလောမှာ မင်္ဂလာဆောင်ကိစ္စအတွက် ဘာရယ်မဟုတ်ပဲ တော်တော်အလုပ်ရှုပ်နေတယ်။ အင်း... ကိုယ်က စနစ်တကျ မစီစဉ်နိုင်တာကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ အိမ်ခန်းငှား၊ အိမ်အသုံးအဆောင်လေး အနည်းအပါးဝယ်၊ ဖိတ်စာအပ်၊ ပြန်ကမ်းဖို့ Thank you ball point လုပ်၊ တိုက်ပုံချုပ်၊ ဖိတ်မဲ့သူတွေစာရင်းလုပ်၊ လိုက်ဖိတ်....ကြည့်လိုက်တော့လည်း သိပ်ကြီးကျယ်ခန်းနား ခက်ခဲတဲ့ ကိစ္စတွေတော့မဟုတ်။
ရင်းနှီးသူများကတော့ ဘာပစ္စည်းလိုလဲပြောပါ အဲဒါလေးတွေ လက်ဖွဲ့မယ်ဆိုပြီး 0ffer ပေးကြပါတယ်။ မွှေ့ယာဖိုးပေးမဲ့လူတွေ၊ ရေခဲသေတ္တာ ၀ယ်ပေးမဲ့သူတွေ၊ DVD Player ၀ယ်ပေးမဲ့သူငယ်ချင်း၊ Microwave ယူမလား Gas မီးဖိုနဲ့ အိုးယူမလား TV ယူမလား.... အဲ စသည် စသည်ဖြင့်ပေါ့။ သူတို့ မေးတာတွေကို ဖြေရင်း မျက်စိထဲပြေးမြင်မိတာက .....ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျား ဆရာတော်ကြီးကျောင်းဆောင်မှာ မိုးဖို့ သွပ်ဘယ်နှစ်ချပ်၊ မျက်နှာကျက်၊ ပြူတင်းတခါး... အလှူရှင်တွေကို စောင့်မျှော်နေပါတယ်ခင်ဗျား.... ဆိုတဲ့ အော်လန်နဲ့ အော်တဲ့ အလှူခံတွေကို... သွားတွေးမိတယ်။ အဟီး ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့က ပေးချင်တယ်ဆိုလို့ အနော်ကလည်း လိုတာလေးတွေ ပြောပြတာပါ။ Suzuki Wagon R+ လေးတစ်စီးလောက် ပေးမယ့်သူရှိရင်လဲ စိတ်မဆိုး ပါဘူးဗျာ။
လူလိုက်ဖိတ်ရတဲ့ ကိစ္စကတော့ အတော်လေးအချိန်ပေးရတယ်။ တချို့တွေကို ဖုန်းဆက်၊ လိပ်စာမေး၊ မတွေ့တာကြာပြီဖြစ်တဲ့သူတွေကို တခြားလူတွေကတဆင့် ဆက်သွယ်ဖို့လိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်တောင်း စသည်ဖြင့်ပေါ့။ နယ်ကလူတွေကိုကတော့ မန္တလေး၊ မိထ္ထီလာ တို့ကို အမြန်ချောပို့က ပို့၊ မော်လမြိုင်က အမျိုးတွေကိုကတော့ မိန်းမရဲ့ ရုံးခွဲကတဆင့်ပို့ပေါ့။ အမြန်ချောပို့ ဆိုတာကလည်း ဘယ်နေရာမှာမြန်တယ်မသိ လွန်ခဲ့တဲ့ သောကြာကပို့ထားတဲ့ဖိတ်စာများ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အထိ မန္တလေးကို မရောက်သေး။ လိပ်မူထားတဲ့သူကိုလည်း ဖုန်းဆက်မရ။ ရှိစေတော့ နံမည်ကိုက အမြန်ချောပို့ဆိုတာကိုး :D
ဖိတ်စာစာအိတ်ပေါ်မှာ နံမည်တွေရေးတော့ နောက်ဒုက္ခတစ်ခုတွေ့ပြန်ရော။ တစ်ချို့လူတွေကြတော့ ဦးဘယ်သူနှင့် ဇနီးပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမဲ့ တစ်ချို့ကိုကြတော့ ရင်းနှီးမှုကို ပြချင်တဲ့အနေနဲ့ မိန်းမ နံမည်ကိုလည်းရေးချင် တစ်ချို့နံမည်တွေက မမှတ်မိ၊ တစ်ချို့က ခပ်ဝါးဝါး ဖြစ်နေ ဒုက္ခ :) အဲဒီတော့လည်း တစ်ချို့ကိုကျတော့လည်း မနီ၊ မ၀ါ၊ မစိမ်း စသည်ဖြင့် ရောကြိတ်ရတော့တာပေါ့ :D မှားရေးမိရင်လဲ ကျွန်မကို မဖိတ်ပဲ နောက်မိန်းမကို ဖိတ်တာလား ဆိုပြီး ပြဿနာရှာခံရဦးမယ်။ တစ်ရက်တစ်ရက် လမ်းကြောင်းဆွဲပြီး ဘတ်စ်ကားတစ်တန်၊ ခြေကျင်တစ်တန် တစ်ချို့နေရာကြတော့လည်း Taxi နဲ့ လိုက်ဖိတ်ရတာပေါ့။ နီးစပ်ရာလူရှိရင်လည်း ပို့ပေးပါဆိုပြီး တစ်ချို့လူတွေဆီမှာထားခဲ့ရတာပေါ့။ ဖိတ်ချင်တဲ့သူနဲ့ ဖိတ်စာအရေအတွက်နဲ့ ကြည့်ပြီး တစ်ချို့ကို လည်း ပေါင်းပြီး ဖိတ်လိုက်ရတာပေါ့။ အခုတော့ တော်တော်ဖိတ်ပြီးသွားပါပြီ။ ဆယ်စောင်လောက်ပဲကျန်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ရင်းနှီးတဲ့သူတွေထဲက ကျန်ခဲ့ရင် ဆဲခံရမှာဆိုတော့ ဘယ်သူကျန်ဦးမလဲလို့လဲ အမြဲဆက်စဉ်းစားနေရတယ်။ တစ်ချို့ကြတော့လည်း list လုပ်တုန်းကမပါဘူး၊ လမ်းမှာတွေ့မှ သတိရပြီး ဖိတ်လိုက်ရတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။ အိတ်ထဲမှာ ဖိတ်စာ သုံးလေးစောင် အမြဲဆောင်ထားရတယ်။
ဧည့်ခံပွဲမှာရိုက်ဖို့နဲ့ အလှဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့ကိုတော့ ဓါတ်ပုံဆရာကို မန္တလေးက တကူးတက မှာရတယ်။ ဆရာကလည်း မအားမလပ်တဲ့ကြားက ရန်ကုန်ဆင်းလာပြီး လာရိုက်ပေးပါမယ်တဲ့။ သူ့အပြင် ရန်ကုန်က ခပ်ချောချော ဘလော့ကာ ဓါတ်ပုံဆရာတစ်ယောက်ကိုလည်း အားဖြည့်ပြီး ရိုက်ပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံထားတယ်။ ဒါ့အပြင် နောက်ထပ်အကိုကြီးတစ်ယောက်က သူကိုတိုင် ဒီဇိုင်းဆွဲ ခဲတို့ပြီး ကိုယ်တိုင်ဆင်ထားတဲ့ မီးဆလိုက်တွေနဲ့ ဓါတ်ပုံဆရာလေးများ ရိုက်ရင် အားဖြည့်ထည့်ပေးပါမယ်တဲ့။ အပြင်မှာဝယ်ရယ် တစ်ရာကျမဲ့ ပစ္စည်းကို သူဘာသာ ပင်ပင်ပန်းပန်း နှစ်ရာသုံးရာ အကုန်ခံဆင်ထားတဲ့ မီးဆလိုက်တွေဗျ။ ကျွန်တော့်မှာ အမေမွေးကတည်းက ရုပ်မလှတဲ့အပြင် အခုဆို အသက်ကကြီးတော့ ဆံပင်ကဖြူ၊ ဗိုက်ပူ ၀တုတ်ဆိုတော့ ဒီဆရာလေးနှစ်ပါးရဲ့ အံ့မခန်း ဓါတ်ပုံပညာတွေနဲ့ နည်းနည်းလေးများ ကြည့်ပျော်ရှုပျော် ဓါတ်ပုံလေးတွေများရမလားဆိုတဲ့ မ၀ံ့မရဲ မျှော်လင့်ချက်ကလေးနဲ့ပေါ့ :D
Posted by little moon at 4:31 PM3comments:
ညက အိပ်မက်မက်တယ်။ မန္တလေး ကြာနီကန်သင်းချိုင်းအလွန်က အိမ်ရှေ့မင်းထန်းတောမှာ ကိုယ်ခန္ဓာ ကြီးကြီး ဆံပင်ကောက်ကောက် ရုပ်ဆိုးဆိုး အကောင်ကြီးတစ်ကောင်ရယ်၊ ပိန်ပိန်ကပ်ကပ် ရုပ်ဆိုးဆိုး စာကလေးလို အကောင်လေးတစ်ကောင်ရယ် နဲ့ ထန်းရည်သောက်နေကြတယ်ဆိုပြီးတော့။ လေပြေလေးကလည်းတိုက်လို့ ထန်းရည်လေးကလည်းကောင်းမှကောင်း။ ကြက်လတ်လတ်ဆပ်ဆပ်ကို အပြေးအလွှား သတ်ပြီးချက်လာပေးတဲ့ ကြက်ကာလသားချက်ရယ်၊ ပဲကြီးလှော်လေးရယ်။ သခင်မတောင်ဖက်ကို လှမ်းမျှော်ကြည့်လို့လည်းရသေး။ တရေးနိုးတော့ ပါးစပ်ထဲမှာပဲ ထန်းရည်အရသာလေး ကျန်နေသလိုလို... ထင်ယောင်ထင်မှားတွေဖြစ်လို့။
ထန်းရည်သောက်တဲ့အကြောင်းရေးနေရင်း ခေါင်းထဲမှာ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ဝင်လာတယ်။ ဆရာသော်တာဆွေ ပြောင်ပြီးရေးထားတဲ့ ကဗျာလေးပါ။
မူရင်း ဆရာဇော်ဂျီရဲ့ ကဗျာကတော့ (ခေါင်းထဲမှတ်မိတာချရေးတာဆိုတော့ အနည်းငယ် လွဲကောင်း လွဲနိုင်ပါသည်။)
Posted by little moon at 5:02 PM No comments:
Consul: Ur name please
Saudiarabian: Abdul Aziz
Saudi:6timesaweek
Consul: I mean , male or female?
Saudi: Both male and female, sometimes even goats
Saudi: Cows and dogs too
Consul: Man, isn’t that hostile???
Saudi: Horse Style, Dog Style, Any Style..
Consul: Oh.. dear!!!!
Saudi: Deer??? No deer, they run too fast!!
Posted by little moon at 12:54 PM 1 comment:
မနေ့က သောကြာနေ့ဆိုတော့ Eleven ဘောလုံးဂျာနယ်ဝယ်ရင်း ဂျာနယ်ဆိုင်မှာ ဒီတစ်ပတ်ထုတ် လျှပ်တပြက်ဂျာနယ်ကို တွေ့လိုက်တယ်။ သိကြားသာသနာပါ အမရယ် ဆိုတဲ့ ခေါင်းစီး စာတန်းကြီးနဲ့ နန္ဒာလှိုင်နဲ့ မျိုးမျိုးခိုင်တို့ရဲ့ ဟန်းဖုန်းပြောနေကြတဲ့ ပုံနှစ်ပုံကို ဖြတ်ညှပ်ကပ်ထည့်ထားတယ်။ ရုပ်ရှပ် ဗွီဒီယို ဇာတ်ဝင်ခန်း ဓါတ်ပုံတစ်ခုခုဖြစ်မှာပေါ့။ အဲဒီနှစ်ယောက်ရဲ့ ဟိုးလေးတကျော် ဖုန်းအတင်းက လူတွေ ကြားထဲလဲအတော်ရောက်နေပြီ။ အစည်းအရုံးကတဆင့် တောင်းပန်ရတာတွေဘာတွေလည်း ဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီ။ ရုပ်ရှင်လောကဆိုတာလဲ ရင်ရှုပ်စရာတွေပါလား။
အခုလျှပ်တပြက်က ဒါကို ဗန်းပြပြီး လူစိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်ပုံရတယ်။ ငါးပွက်ရာ ငါးစာချ .... တော်တော် အဆင့်အတန်းမရှိတဲ့ဂျာနယ်။ ကိုယ့်ဦးတည်ချက် ကိုယ့်တန်ဖိုးဆိုတာလည်း လုံးဝရှိပုံမရှိ။ ငွေရ စောင်ရေ တက်ရင်ပြီးရောဆိုတာမျိုး ဖြစ်နေတယ်။ မျက်နှာဖုံးတင်စရာ လူစိတ်ဝင်စားမဲ့ သတင်းတွေ အဲဒီလောက်တောင် ရှားပါးနေပြီလား။ သတင်းမရှာတတ်တော့ဘူးလား။
မင်းသားဒွေး သေတုန်းက သတင်းဦး သတင်းထူးအဖြစ် MyanmarTimes ကအချပ်ပိုနဲ့ အဖုံးတင်ခဲ့တာမျိုးက တစ်မျိုးပေါ့။ အဲဒါမျိုးကိုက လက်ခံပေးလို့ရသေးတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ လေးငါးပတ် ကတည်းက သတိထားမိတာက လျှပ်တပြက်မှာ အစိုးရကို ဖော်လန်ဖားလုပ်တာတွေ၊ ပွဲဆူမဲ့ ဖွတဲ့ အတင်းအဖျင်းတွေပဲ တွေ့နေရတာ။ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ပတ်လောက်ကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဆက်ဆံရေးဝန်ကြီးပုံကို မျက်နှာဖုံးပြည့်ထည့်ထားတာ သတိထားမိတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း ကိုယ်တိုင် ၀ယ်မဖတ်တဲ့အပြင် သူများ ၀ယ်ထားတာကိုတောင် လှန်မကြည့်ဖြစ်တော့ဘူး။ ဟိုးအရင် ဂျာနယ်ခေတ်ဦးက နံမည်ကောင်းခဲ့တဲ့ လျှပ်တပြက်ဆိုတဲ့ ဂုဏပုဒ်ကိုမှ အားမနာ။
ဆုံးသွားရှာပြီဖြစ်တဲ့ သူငယ်ချင်းဥာဏ်မိုး တစ်ချိန်က ပြောခဲ့တဲ့စကားလေးကို ပြန်သတိရမိသေး။ ဒီကောင်တွေက ဖက်ခွက်စားတွေကွ ... ယုံကြည်ချက် ခံယူချက်ဆိုတာ ဘာမှမရှိဘူး။ တက်တဲ့အစိုးရ ငါ့အစိုးရဆိုတဲ့ သာကူးတွေတဲ့။ ရှစ်ဆယ့်ရှစ်ကာလက တရားတွေတက်ဟော ဆန္ဒတွေပြ၊ စစ်တပ်အစိုးရ လဲတက်ရော အကော်ဒီယံကြီးတကားကားနဲ့ ဖားသီချင်းတွေဆိုနေလိုက်တာများ .. ငါတို့ အဖေတို့လို စာရေးဆရာတွေ ကဗျာဆရာတွေကမှ တကယ့်ကို ယုံကြည့်ချက် ခံယူချက် အပြည့်ရှိတာတဲ့ .... သူငယ်ချင်းက စိတ်ဆိုးမာန်ဆိုးနဲ့ ပြောခဲ့တာလေးပါ။ အခုတော့ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းရော သူ့အဖေပါ မရှိရှာတော့ဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ အခုဆို စာပေလောကမှာလဲ ဖော်လန်ဖားတွေ လုပ်စားတွေတွေနေရသလို ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် လောကမှာလဲ ကိုကျော်သူတို့လို ကိုဇာဂနာတို့လို လူတွေလည်း ရှိသေးတာပဲ။ ဘယ်လောကသားရယ်ဆိုပြီး ၀ါးလုံးရှည်နဲ့ရမ်းတာမျိုးဆိုရင် မတရားသလို ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်။
Posted by little moon at 12:06 PM 1 comment:
ဈေးကွက်ဂျာနယ်ထဲက ဆရာကြီး ဦးအောင်သင်းရဲ့ ဆောင်းပါးလေးပါ။ ကြိုက်လို့ ကောက်နုတ်ပြိး တင်ပေးထားပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်စာမှာ အခြေခံအားဖြင့် မင်းတို့ ခုခေတ် ဆယ်တန်းကောင်လေးတွေလောက်သာ တတ်ခဲ့တဲ့ အောင်သင်းဟာ တောင်တွင်းမှာ အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာခဲ့ရပုံကို ပြောပါဦးမယ်။
ငါက အင်္ဂလိပ်စာအခြေခံကို ထောင်ထဲမှာ သင်ခဲ့ရတာပါ။ ဒါ့ကြောင့် အပြင်ကို ရောက်လာတော့ ဒီအချိန်မှာ အထက်တန်းကျောင်း အင်္ဂလိပ်စာ ပြဌာန်းစာအုပ်ကလေးတွေကို တစ်အုပ်မကျန် ဖတ်ပါတယ်။ မှတ်ပါတယ်။ အဲဒါလေးတွေကို စီရင်တဲ့ ဆရာကြီးက မိုက်ကယ်ဝက်စ်ဆိုတဲ့ ဆရာကြီးပါ။ သူကပဲ တွဲဖက်ပြီး ဖတ်ကြဖို့ ဂန္တ၀င် ၀ထ္ထုကြီးတွေကို အလွယ်အကျဉ်း simplied and abridged ပြန်ရေးပြီး ထုတ်လိုက်ပါသေးတယ်။ သူလွယ်ကျဉ်းလုပ်ထားတဲ့ စာအုပ်တွေကလဲ ဆာရိုက်ဒါဟတ်ဂတ်တို့ ဆာဝေါလ်တာစကော့တို့ ရေးတဲ့စာအုပ်တွေ များတယ်။ ဒီတော့ ငါတို့က ဆရာကြီး ရွှေဥဒေါင်းရဲ့ ပရိသတ်မဟုတ်လား။ ရူပနန္ဒီ ရူပကလျာဏီဆိုတာတွေ၊ ရတနာသိုက်၊ စောလမုန်သိုက်ဆိုတာတွေ အသည်းစွဲဖြစ်နေခဲ့တော့ ဖတ်လို့ကို မ၀နိုင်ဘူး။ ဆရာကြီးကလဲ မူရင်း အင်္ဂလိပ်စာရဲ့ အလှကို ပါနိုင်သမျှပါအောင် လုပ်ထားတော့ ၀တ္ထု ဇာတ်လမ်း ဇာတ်ကောင်ကိုသာမကပဲ စာ ကိုပါ စွဲတော့တာကိုး။ ဒီတော့ စကားအသုံးအနှုန်း၊ ၀ါကျတည်ဆောက်ပုံတွေပါ ခေါင်းထဲ စွဲကျန်ရစ်တာပေါ့။
ရန်ကုန်ကို တစ်နှစ်မှာ နှစ်ခါ၊ သုံးခါလောက် ဆင်းလာလေ့ရှိပါတယ်။ ရောက်လိုက်ရင် ပလက်ဖောင်း စာအုပ်အဟောင်းဆိုင်လေးတွေကို ၀င်ပြီးမွှေလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက စိန့်ဂျွန်း၊ စိန့်ပေါ၊ မက်သဒစ် စတဲ့ ကျောင်းကြီးတွေက အင်္ဂလိပ်စာ ပြဌာန်းစာအုပ်ချင်း မတူကြဘူး။ အဲဒီကျောင်းသုံး စာအုပ်အဟောင်းတွေ အလွန်ပေါတာကိုး။ တစ်အုပ်မှ တစ်မတ်၊ ငါးမူးပဲပေးရတာ။ အဲဒါတွေကို ဖတ်စာအစုံလိုက် ၀ယ်ရင်တောင်မှ တစ်ဆယ်၊ ဆယ့်ငါးကျပ် မကုန်ဘူး။ အဲဒါတွေကို သိမ်းကျုံး ၀ယ်လာပြီး ဖတ်စာ တစ်ကနေပြီး လေးငါးခြောက်အုပ် အကုန်ဖတ်တာပဲ။ သင်ခန်းစာတိုင်းမှာပါတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း၊ ကွက်လပ်ဖြည့် ဆိုတာတွေ ကိုလဲ စိတ်ထဲမှာ ဖြေကြည့်လိုက်တာပဲ။
ငါက ကဗျာကိုလဲ ၀ါသနာပါလေတော့ ဆယ်တန်းမှာ ပြဌာန်းတဲ့ ကဗျာစာအုပ်တွေကို တစ်ပုဒ်မကျန် အကုန်ဖတ်တယ်။ ဒီတုန်းက အိန္ဒိယကထုတ်တဲ့ ကဗျာအဖွင့် စာအုပ်တွေကို ၀ယ်လို့ရတယ်။ အဲဒီစာအုပ်တွေကို ဖတ်ပြီး ကဗျာအရသာကို ခံစားရတာပေါ့။ တစ်ချို့ကဗျာတွေကိုဆိုရင် ကြိုက်လွန်းလို့ ခုထက်တိုင် နှုတ်ငုံရနေပါသေးတယ်။
ရန်ကုန်ကို ရောက်သခိုက်မှာ ရီးဒါးဒိုင်ဂျက်လို မဂ္ဂဇင်းမျိုးတွေကိုလဲ အဟောင်းဆိုင်မှာ တစ်အုပ် တစ်မတ်၊ ငါးမူးနဲ့ ၀ယ်လာတာပေါ့။ ပါသမျှဆောင်းပါး အကုန်ကိုတော့ ဘယ်မှာ ဖတ်တတ်ဦးမှာလဲ။ နားလည်သမျှလေးတွေ လျှောက်ဖတ်ပေါ့။ ..... ဘယ်သူ့အကူအညီကို အားကိုးရသလဲဆိုတော့ အဘိဓာန်ပါပဲ။ ပထမဆုံး စပြီးသုံးခဲ့ရတဲ့ အဘိဓာန်ကတော့ ပြောခဲ့တဲ့ မစ္စတာဝက်စ်ရဲ့ New Method English Dictionary ပါပဲ။ ကျောင်းသားသုံးဆိုတော့ သိပ်ပြီး မပြည့်စုံလှဘူး။ ဒီတော့ အောက်စဖို့ အဘိဓာန်၊ ချိမ်းဘား အဘိဓာန်တွေ တက်ကိုင်ရတော့တာပေါ့။ အဲဒီ အဘိဓာန်ကြီးတွေရဲ့ ဖွင့်ဆိုချက်တွေကို ပင်ပင်ပန်းပန်း ဖတ်ခဲ့ရတာ။ ဒီနည်းနဲ့ပဲ အင်္ဂလိပ်စာကို ဆည်းပူးခဲ့ရပါတယ်။
မင်းတို့ကတော့ တကယ့်ကို ကျွမ်းကျင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ကျွမ်းကျင်မှုကို အသုံးချတာမှာတော့ ငါတို့ခေတ်က လူငယ်တွေရဲ့ ခြေဖျားတောင် မမီဘူးလို့ ရက်ရက်စက်စက် ပြောပစ်လိုက်ချင်တယ်။ ၀က်ဘ်ဆိုက်တဲ့။ ဘာသုံးသလဲမေးကြည့်တော့ များသောအားဖြင့် ဂိမ်းတဲ့။ ချက်တင်းတဲ့။ ယိမ်းနွဲ့ပါးနဲ့ ငါးခုတ်နေတဲ့ ကောင်တွေလို့သာ ပြောလိုက်ချင်တော့တယ်။ ယိမ်းနွဲ့ပါးဆိုတာ မော်ဒယ်ဂဲလ် နာမည်များ ထင်နေကြဦးမလားမသိဘူး။
ငါ့စကားလုံးတွေ ပြောပေါက် ဆိုပေါက်တွေ ကြမ်းနေရင်လဲ သည်းခံကြပေတော့ကွာ။ မင်းတို့ကို ငါတို့ထက် ပိုပြီး ထက်ထက်မြက်မြက် ဖြစ်စေချင်လွန်းလို့ဆိုတာ သဘောပေါက်ကြပါတော့။
မင်းတို့မှာ ကွန်ပျူတာရှိနေရင် ကလေးသုတစွယ်စုံ စီဒီတွေ တစ်ပုံကြီးရှိပါတယ်။ ဈေးကလည်း ချိုပါဘိသနဲ့။ အဲဒီစီဒီ တစ်ချပ်ရှိရင် ဖတ်ပါလေရော့။ ကွန်ပျူတာနဲ့ ထိုင်မဖတ်ချင်ရင် စာကူးပြီးထုတ်လိုက်ပေါ့။ လက်ဖက်ရည်ဖိုးလောက် ကုန်တာပါ။ အဘိဓာန်စာအုပ်တစ်အုပ် ဘေးမှာချပြီး ဖတ်ကြည့်ပါလား။ မင်းဟာ ဆယ်တန်းမအောင်ရင်လဲ အဲဒီအခြေခံလောက် ရှိပြီးသားဖြစ်ရင် ခြောက်လလောက် လုပ်ကြည့်စမ်းပါ။ မယုံနိုင်လောက်အောင် တိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်။ အင်္ဂလိပ်စာရော အသိဥာဏ်၊ အတွေးအခေါ်ပါ တိုးတက် လာပါလိမ့်မယ်။အေး - မင်းက တကယ်တိုးတက်ချင်ရင်ပေါ့။
Posted by little moon at 6:40 PM No comments:
နှင်းစိုစိုတွင် ခွာညိုပန်းကလေးကို မိန်းကလေး ပန်ခဲ့သည်။ မိန်းကလေး၏ ယဉ်ကျေးသော အမူအရာသည် ခွာညိုပွင့် ယဉ်ယဉ်နှင့် လိုက်ဖက်လှသည်။
ခွာညိုပွင့်တွင် အယဉ်ကို မြင်တတ်သော မိန်းကလေး၏ စိတ်ဓာတ်ကို လေးမြတ်မိသည်။ ခွာညိုပွင့်၏ အလှသည် ဣနြေ္ဒရသည်။ သိမ်မွေ့သည်။ မော်ကြွားဟန် မရှိချေ။
ဖြူစင်သော နှင်းသည် ခွာညိုပွင့်ကလေး၏ မျက်နှာပေါ်တွင် လန်းဆန်းအောင် ဆွတ်လိုက်သည်။ ပြာမြမြ ခွာညိုသည် သိမ်မွေ့စွာ ပြုံးနေသကဲ့သို့ ရှိလေသည်။
တောစပ်ကလေး၌ ခွာညိုပန်သော မိန်းကလေးသည် ကျေနပ်သောအသွင် ကြည်လင်စွာ ပြုံးလေသည်။ သူနှင့် ခွာညိုသည် တစ်နှစ်မှ တစ်ခါသာ ဆုံရသည်။ သို့ရာတွင် ခဏဆုံရခြင်းကို ဘယ်အခါမှ မမေ့နိုင်ရှာပေ။
ကဗျာဆရာကလေးသည် ခွာညိုပွင့်အနီးသို့ ရစ်သီရစ်သီ လုပ်ကာ အလှအယဉ်ကို အကဲခတ်လေသည်။ သူ့နှလုံးသားတွင် သိမ်မွေ့ ယဉ်ကျေးသော ကာရန် မပွင့်ဖူးသဖြင့် တေးမဆိုနိုင်ဘဲ ရှိလေသည်။ ခွာညိုပွင့် အနီး၌ ယောင်လည်လည် လုပ်ကာ တေးအစအနများကို စပ်ဟပ်ကြည့်နေတုန်း ရှိလေသည်။
သူ့စိတ်ထဲ၌ မိန်းကလေးနှင့် ခွာညို ပနံရသကဲ့သို့ ကာရန်အလှနှင့် ပနံမရနိုင်သဖြင့် မကျေမချမ်း ဖြစ်နေရှာလေသည်။
ကဗျာဆရာလေး၏ နှလုံးသားတွင် အေးမြ ချမ်းမြေ့သောအခါ ကာရန်ကလေးများ အစီအရီ ဖူးပွင့်ပေလိမ့်မည်။
ပိတောက်မှ သရဖီသို့ (တင်မိုး)
Posted by little moon at 2:22 PM No comments:
Posted by little moon at 1:22 PM No comments:
မနေ့မနက်က နိုးတော့ အဖေက သူ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ ဖုန်းပြောနေတယ်။ ဖုန်းချပြီး သူကလာပြောတယ် သားရေ စလောင်းတွေကိုတော့ ကိုင်ပြီတဲ့။ အတည်မပြုရသေးတဲ့ သတင်းအရ တစ်နှစ်ကို လိုင်စင်ကြေးက ဆယ်သိန်းတဲ့။ အဖေက ဆက်ပြောတယ် ငါတို့ ပြန်မတပ်ဖြစ်တာတောင် ကံကောင်းတယ်တဲ့။ ကောလဟာလတွေအရ စလောင်းတပ်ထားတဲ့ တိုက်တွေကို ဓါတ်ပုံနဲ့ မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်တဲ့။
အားလုံး မသေမချာတွေဖြစ်နေပေမဲ့ သေချာတာတစ်ခုက သက်ဆိုင်ရာအနေနဲ့ သူတို့ ထိန်းချုပ်မှုနဲ့ လုံးဝကင်းလွတ်နေတဲ့ ဒီစလောင်းတွေကို တစ်နည်းနည်း ထိန်းချုပ်ချင်နေတာ ကြာပြီဗျ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ပူပူနွေးနွေးအဖြစ်အပျက်တွေတုန်းက ဒီစလောင်းနဲ့ ဘလော့တွေကြောင့် လိမ်သမျှတွေပေါ် လုပ်သမျှတွေ နာရီပိုင်းအတွင်း မီဒီယာတွေ ပေါ်တက်လာပြီး ပြည်သူများကြည့်ခွင့်ရခဲ့ကြလို့ သတင်းစာနဲ့ မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားက အော်သမျှ လှိမ့်သမျှတွေ ဘူးပေါ်သလို အလိမ်ပေါ်ခဲ့ရတာတွေကိုလည်း အစာကြေပုံမရဘူး။
အိမ်မှာကလည်းအရင် အိမ်ခန်းအဟောင်းတုန်းက ရှစ်ပေစလောင်းလေးတပ်ထားတာ။ အဖေက သတင်းတွေကြည့် ကျွန်တော်က ဘောလုံးပွဲကြည့်တာပေါ့။ အခုတိုက်ခန်းသစ်ရောက်တော့ တိုက်ပိုင်ရှင်ကပေးမတပ်ဘူးဗျ။ ခေါင်မိုးပေါ်တင်ခွင့်မပေးဘူး။ ဒါနဲ့ပဲ ၀ရန်တာမှာ ဒီလိုပဲ ဖြုတ်ပြီး ပုံထားတာ။ ၀ရံတာကနေပဲ ထုတ်ပြီး တပ်မယ်တော့ စိတ်ကူးထားတာ အလုပ်တွေများတာနဲ့ မလုပ်ဖြစ်ပါဘူး။ အခုတော့ မတပ်ဖြစ်တာပဲ ခပ်ကောင်းကောင်း ဖြစ်နေတယ်။
တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်လဲ တီဗွီလိုင်းတွေရောင်းနေတဲ့ Family TV5 ရောင်းကောင်းအောင် လုပ်ပေးသလိုဖြစ်နေပြီ။ TV5 ကလည်း မသက်သာပါဘူး။ စက်ဖိုး တပ်ဆင်ခက ကနဦး နှစ်သိန်းဝန်းကျင်၊ ဘောလုံးပွဲတွေပါတဲ့ Package က တစ်လ တစ်သောင်းခွဲဝန်းကျင်ဆိုတော့ ၀ယ်တပ်နိုင်ဦးမယ်မထင်ပါဘူး။ အခုအတိုင်းပဲ စနေတနင်္ဂနွေ ဘောလုံးပွဲချိန်ဆို ဘီယာဆိုင်သွားထိုင်ပြီး ကြည့်တာပဲ ကောင်းပါတယ်။
Posted by little moon at 4:20 PM No comments: